Olee otu esi esere foto mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Gba igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Olee otu esi esere foto mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
Ị nwere ikesee fotonke aịgba ígwèìgwè elu n'ihu, ọkacha mma na a jụụ n'okporo ụzọ ma ọ bụịgba ígwèụzọ ebe ị na-etinyeghị onwe gị ma ọ bụ ha n'ihe ize ndụna-ewereihefoto. Ị nwere ikenaraa selfiemgbena-agba ịnyịnya, ma site n'akụkụ ma ọ bụ site n'ihu. Ijide igwefoto / ekwentị na elu igwe ga-ejide ihe ọ bụlandị na-agba ịnyịnya ígwèn'azụ gị, kwa.
(Spin gears) - Ikekwe ihe kachasị ewu ewu na Instagram maka onye na-akwado GMBN ga-abụ ogbugba Bike Vault, nri? Nke a bụ otu ị ga-esi tinye igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe na ị nwere ike ịgba ọsọ kachasị mma n'agbanyeghị ihe ị na-agba ya. (Light bulb honks) (snare drum rolls) (obere mbigbọ) Ya mere, na nke mbụ, ị ga-achọ ezigbo ihe ndabere. Chọghị ebe mgbagha na-agbagharị igwe kwụ otu ebe na onye na-atụ osisi nke ọma ma ọ nwere ike ịdị jụụ.
trek domane nyochaa
Mana na mkpokọta, naanị ịchọrọ iwepu ndabere site na ogbugba ahụ. Nke abuo, ị chọrọ inwe pedal gị na elekere atọ ka ha mara mma na larịị ma dị larịị. Ọmarịcha ma dị mma.
Mee ka akara ngosi taya gị kwụ n'ahịrị. Ma mgbe ahụ n'ezie ịkwesịrị ịgbanye igwe kwụ otu ebe gị. Anyị ahụla ka ndị mmadụ na-agba ịnyịnya ígwè ha ma na-etinye okpu agha, ma 'ọ masịrị gị:' Ọ dịghị mma maka okpu agha gị. 'Okpu agha gị bụ ihe nchebe nye isi gị, yabụ gbalịa idebe ya n'ụzọ ahụ.' Ọ kachasị mma iji naanị mkpisi.
Yabụ ihe m ji mee ihe bụ obere osisi pọksiglass. Dị dị ka ihe osise anwansi anwansi n'ihi na na foto ndị a na-adịghị ahụ anya ma ha dị mfe mmepụta oyiri Gosi gị, Agaghị m eji nke a taa. M n'ezie na-akwado igwe kwụ otu ebe m na mkpanaka m hụrụ n'akụkụ okporo ụzọ, enwere m ike ijide rotor diski ebe a.
Ma ebe ọ bụ na ọ bụ ntakịrị ikuku ikuku, m weere ụfọdụ obere obere pebbles ahụ ma m wedged ha n'okpuru wiil ahụ dị ka chucks, mana n'akụkụ a nke igwe kwụ otu ebe, m ga-ese foto site n'akụkụ ahụ, jiri nke ahụ can nwere ike 'Ahụghị ya, mana ọ na-akwụsị ịtụgharị ebe ọ bụla. Akwa elu n'ọnụ. Ma mgbe ahụ, m ga - agwa gị maka ụfọdụ ntọala igwefoto yana otu esi enweta nsonaazụ kacha mma na igwefoto gị.
Nke mbu, ka anyi kwuo maka GoPro. O doro anya na ịnwere ike ịnya igwe kwụ otu ebe m dị mma ebe a na GoPro, ị ga-enweta ọtụtụ ebe dị mma. Ma ọ bụrụ na ị bịaruo igwe ahụ nso iji gbalịa ị nweta nkọwa zuru ezu, igwe kwụ otu ebe ga-agbagọ n'ihi oghere nke oghere ma ọ ga-adị ntakịrị.
Nwere ike ịbụ ihe ọchị ị nweta nsonaazụ dị egwu, mana n'ezie, ị gaghị enweta kacha mma Bike Vault na GoPro. Yabụ ka anyị rute na ekwentị, ị nwere ike iwe ihe ubi mgbe niile. Na m ga-abanye nke ọma n'ihi na ị na-anwa ịnweta ụfọdụ ihu mgbagharị na ebe a.
Ọ bụrụ na ị dị elu, igwe kwụ otu ebe agaghị eme nke ọma na mbara igwe. Ma mgbe ị na-elele na ihuenyo ugbu a, ị na-ahụ ihe atụ nke ihe nke a nwere ike ịdị ka iji naanị otu ekwentị, nke ahụ bụ onyonyo a na-akwadoghị, site na igwefoto, mana ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, DSLR ma ọ bụ nwee kọmpat igwefoto ị nwere ike nweta ụfọdụ n'ezie ịtụnanya pụta ebe a. Nke mbu, ka anyi lee igwe komputa anya.
Ya mere ọtụtụ kọmpat igwefoto ị ga-ewere na ezumike, dịka ọmụmaatụ, nwere ezigbo mbugharị anya dị mma. Maka nsonaazụ kachasị mma, ị ga-achọ mbugharị, mana gbaa mbọ hụ na igwefoto gị abụghị mbugharị dijitalụ. Ọ bụ n'ezie ihe mbugharị anya iji mee ka oghere ahụ na-agagharị, ị na-eme nke a, ịbugharị ma ịlaghachi na-atụgharị igwe kwụ otu ebe nke ọma na nke ahụ ga-eme ka mpịakọta ahụ dị n'okirikiri ka igwe kwụ otu ebe wee pụọ n'akụkụ.
Yabụ enweghị m mbugharị na obere igwefoto igwefoto m, mana nke ahụ nwere. Enwere m oghere 50 milimita. Ya mere, otu, m ga-a zaghachi azụ otú ahụ igwe kwụ otu ebe jupụtara n'ime etiti nke foto na m na-aga gbaa na f2 nke bụ ọnụ ọgụgụ kasị ala m oghere ga-aga naanị iji mesie nke ahụ ike.
The igwe kwụ otu ebe na-ehulata na nanị kpamkpam site n'akụkụ. Yabụ enwere m ihu igwe na-agagharị na azụ nke kọmpụta m ebe a ka m nwee ike ịgbagide ya wee lee ala. Mana m tinyere igwefoto ahụ nke ọma ma dị ala.
Naanị m na-enweta okwute ole na ole dị na mgbada ka ọ na - enyere aka ịse foto ahụ. Ah, enwere mint. (Lightbulb honks) Ugbu a lee anya na ihuenyo ahụ.
Nke a bụ foto m sere na obere kamera Fuji m. Mana ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere DSLR ị nwere ike nweta ụfọdụ nsonaazụ ọzọ na nke ahụ. Enwere m mbugharị 24-70 ebe a.
Naanị m ga-etinye ogbugba na ihuenyo na 24 na ogbugba na 70 naanị ka ị wee hụ ihe dị iche ka ọ na-adọrọ uche gaa igwe gị. Ma nke a bụ n'ezie foto kacha mma igwe kwụ otu ebe ị nwere ike iwe. Olile anya na ihe omume Instagram a diri gi nma.
Ọ ga - enyere gị aka ị nweta ụfọdụ gbaa ịtụnanya. Ihe ikpeazu igha eme bu dezie foto gi. Na-ahapụ mgbe niile n'echiche na ihe pere mpe.
Ọ dị mfe itinye ọtụtụ mmetụta na ya ma mebie ogbugba ahụ. Ma eleghị anya, ị ga-eweta onyinyo ma ọ bụrụ na ịnwere, ma ọ bụ tinye obere vibrancy, mana gbalịa idobe ya dịka okike dị ka o kwere mee. Maka ụfọdụ ederede ndị ọzọ dị ukwuu, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere igwe kwụ otu ebe m, mega ebe a, pịa ebe a n'akụkụ aka nri ala, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdezie ederede nke gị, nke yiri nke a na Instagram, pịa ebe a n'elu.
N'ezie, dị ka mgbe niile, pịa ụwa iji denye aha ebe a n'etiti. Enwere ụdị ọhụụ dị ka nke a kwa ụbọchị. Ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, nye anyị mkpịsị aka aka.
strava na-agba ọsọ na ịgba ígwè GPS
Bikegba ịnyịnya ígwè elekere abụọ ọ dị mma?
Ihe ọ na-ewe ugbu a maka awa 24 n'etiti oge oyi, ị jụrụ onwe gị ajụjụ a kpọmkwem n'okpuru isiokwu 24 nke m mere na Mark, yabụ echere m ụzọ kachasị mma iji zaa ajụjụ ndị ahụ niile site na nke a Iji gosi gị ugbu a na ihe ịma aka bụ ide maka awa 24, awa nke ngụkọta ala ka anyị wee chọọ igwe kwụ otu ebe nke dị mma maka ogologo oge, anyị setịpụkwara onwe anyị ebumnuche nke ikpuchi kilomita 500, n'ihi ya, a ga-eme ya ugbu a. BMC nwere obi ụtọ ịkwado isiokwu ahụ ugbu a, m na-agba ịnyịnya igwe na-acha ntụ ntụ n'isiokwu ahụ na nke a bụ acha anụnụ anụnụ, mana dịka m kwuru tupu nke a bụ igwe BMC Road, ọ bụ igwe kwụ chịm nke gbadoro anya na nke anyị Endeavor na-ege ntị dị ka otu awa-ogologo ụzọ igwe kwụ otu ebe na anyị nwere na-etinye n'ezie obosara taya na nkasi obi, na luckily, a etiti na-eme na. Ma o nwekwara otutu nnabata wuru eku. M bụ e Top ọduọ igwe efu-otu, n'ụzọ zuru ezu na SRAM Red Badge akpụkpọ ụkwụ na-esi Envys otu nke kasị mma atụmatụ nke Ro. jikọtara w igwe bụ ikike ịbawanye mkpokọta ahụ na isi mkpuchi abụọ dị iche iche, ugbu a ọ bụ obere ihe mana ọ na-enye ndị ọzọ na-agba ịnyịnya otu igwe kwụ otu ebe aka na-enweghị ọtụtụ ohere n'okpuru osisi.
Ihe ọzọ dị mma nke Robemachine bụ njikọ nke eriri niile n'ihi na ọ dị oke nzuzu ugbu a agbakọkwara ụdị nke gara aga na ọ nwere ike bụrụ otu n'ime ndị mbụ, ọ bụrụ na ọ bụghị nke mbụ, ugbu a niile, ọ bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke maka ihe ịma aka Mana n'adịghị ka ihe nkiri 1903, ọ dị nwute na enweghị m ike iji igwe kwụ otu ebe bụrụ ihe ngọpụ, ugbu a nke ahụ bụ akụkụ nke ihe ịma aka m na-echegbu onwe m banyere, ịgba ịnyịnya abalị bụ naanị ịnyịnya abalị m na-agagharị n'etiti. nke oge okpomọkụ Riding France ebe anyị na-agba ịnyịnya ihe dị ka elekere isii n'abalị, ugbu a, anyị na-ebugharị awa iri na anọ site na abalị UK n'etiti etiti oge oyi, dịka ị nwere ike iche n'echiche na m bụ onye na-atụ ụjọ na anyị ga-achọta oriọna ndị mara mma na ihu igwe niile Ọnọdụ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi mgbe ịkwọ ụgbọala maka awa 14 n'abalị na-enweghị ịnwụ na anyị, nke ahụ bụkwa ìhè iji ihe yiri nke ahụ, yabụ ana m eji igwe kwụ otu ebe n'ihu, nke a bụ StradaMach 10 site na ikpughe. Ọ na-apụta na naanị 230 gram ma napụta 1500 lumens na ọnọdụ ya kachasị mma, nke jọgburu onwe ya nke mere na m ji ya naanị na Midway ntọala nke na-enwu gbaa, na ikwu eziokwu, enwere m ya maka awa 16 ma ghara ' t ọbụna nwere na-ana ya ya mere na nke a bụ nnọọ zuru okè ugbu a, a otutu dị iche iche ụdịdị ma ọ dị m ka flash mode mere ka ndị ọrụ n'okporo ụzọ na ọ n'ezie na-echebe anyị mma na-adị mfe karịa awa ahụ oke zuru oke, ugbu a ihe m na-eji tupu, na ihe ịma aka bụ a n'elu tube n'akpa uwe, nke a bụ site n'ọnụ mkpịsị ụkwụ, ọ bụ nnukwu tank akpa na ọ ghọrọ incredibly bara uru mgbe m chọrọ na-ana m WOH isi unit. Isi isi Mywahoo na-ewe ihe dika elekere iri na isii, ọ bụghị awa iri abụọ na anọ, ma anyị were ya maka ịgagharị, yabụ anyị jiri ọkụ azụ nke yiri ka ọ ga-ehichapụ batrị obere ọsọ, mana ọ dịkwa mma itinye nri na ya, dịka m achọpụtara na ọ dị mfe karị iji nweta nri si n'akpa akpa karịa karịa n'akpa azụ m nke mere na enwere m mmasị na mkpụrụ obi m na ọ bụ nnabata ịnabata ịnyịnya ígwè m, nke anyị nwekwara mkparị na ịnyịnya ígwè Topekanow anyị nwere ihe niile dị mkpa maka ngwa nrụzi taya arụ ọrụ ka tub gas canister patches nwere ike idozi ihe dịka nke ahụ na mgbe anyị kewara ụzọ na ndị ọrụ nkwado anyị enwere ike idozi poncho na-enweghị oke nsogbu dịka ị nwere ike ịhụ mgbe isiokwu anyị nwere ihu ọma inwe ndị ọrụ na-akwado anyị nke nyere anyị ohere iwere anyị mgbanwe ndị ọzọ na enweghị oghere nchekwa na nke anyị igwe kwụ otu ebe, yabụ amalitere m n'ụgbọ ịnyịnya ígwè na obere mkpịsị ụkwụ akwa site na mmiri m malitere site na okpuru mmiri m malitere. ya na okpu ogologo aka ya adi m ma wo Enwere m akwa mkpuchi na okpu agha na okpu agha n'elu ya ma n'ezie ugogbe anya maka anwụ na ụgbọ ala ahụ na ndị ọrụ m nwere oge mgbụsị akwụkwọ abụọ ọzọ na jaket gbadara agbakwara m uwe aka abụọ ka m wee nwee gia neoprene site na isi iyi mana m Ha nwere uwe ụkwụ ụkwụ oyi m nwere akpụkpọ ụkwụ abụọ, yabụ otu ụzọ dị mkpa na otu ụzọ oyi, ugbu a enwetala m sọks abụọ na akpụkpọ ụkwụ abụọ ọ gbanyere kpamkpam na elekere 12 na mgbe anyị kwụsịrị na gburugburu otu elekere gbanwere na ime ihe n'eziokwu m nwụrụ nke ụkwụ na-egbu oyi ya mere na m gbanwere sọks na akpụkpọ ụkwụ mana akara kwuru, agaghị m agbanwe Bib Tightscuz m dị mma, mana ha na-agbanyekwa mmiri, ma echere m na nke ka mma, na ic h kacha ahapụ m, gloves dị mma n'ihi na mkpịsị aka m na aka m nwere ezigbo oyi, yabụ idebe gloves ndị a dị mma na akọrọ bụ ihe dị oke mkpa ma ọ gafere m site na Nri bụ nnukwu akụkụ nke ụdị ụgbọ ala ọ bụla dị ogologo Ogologo oge ị na-akwọ ụgbọala, ị na-adabere na ezigbo nri kama ịmegide Nke a bụ n'ihi na ị na-anya ụgbọ ala karịa ike y ị nwere ike ịgbari nri ahụ n'ụzọ dị mfe karị ma ịnwe ogologo oge ị ga-eri ya mana anyị etinyela ihe ọhụụ na karama anyị ka ndị uwe ojii ga abia obuna ma oburu na anyi eribeghi banana ugbua o nwebeghi mgbe m nwara nchikota a, mana ikwu eziokwu o di nma karie, anyi n’abali ma oga ju gi ezigbo oyi.
Anyị na-enwe olileanya maka ụfọdụ nri na-ekpo ọkụ nke na ọ dabara nke ọma na ndị ọrụ ahụ ga-aga were ụfọdụ azụ na ibe nke dị ịtụnanya, mana? anyị riri ya ngwa ngwa na anyị abụọ nwere ntakịrị nri, nke ahụ bụ ntakịrị ihe nwata nwoke na-eme n'ụlọ akwụkwọ na 3am anyị na-agbakwunye McDonald's, ugbu a onye ọ bụla na-edozi ahụ n'ebe ahụ ga-enweta isi ha n'aka ha mgbe ha na-eche banyere na anyị na-aga mcdonalds na 3am, mana ime ihe n'eziokwu ọ dị mma, ọ bụ ihe dị iche, ọ bụ ntakịrị nri ọkụ na kọfị na nke mere anyị n'abalị ahụ, anyị gara ụfọdụ gels na Quit egwuregwu nri? Iji nye anyị ike mmụba nke ume tupu anyị agafee ụtụtụ mgbe chi bọrọ, anyị chọpụtara ọmarịcha ụlọ ahịa dị na mpaghara ebe m na-eme iko iko ọgbụgba agba na otu ụzọ abụọ na nke ahụ dị ịtụnanya n'ihi na enwere m otu onye siri ike n'oge. , ee ee, ana m ekele kpakpando m nwere obi ụtọ maka igwe ọkụ dị ọkụ na nke ahụ mere ka anyị ruo na njedebe ị masịrị isiokwu a, nye ya nnukwu mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ịma aka maka onwe gị wee pịa njikọ ahụ n'okpuru
Olee otu esi ewere selfie na igwe igwe?
Abụọawan'okporo ụzọ dị larịị ga-eme ka calorie dị ole na ole karịa nke abụọ-oge njemnke na-aga ogologo. Oburu n’inwe otutu uka n’aru ugwu, igha eme ka calorie karie. Iji maa atụ,aka elekereugwuigwe kwụ otu ebe, nke na-agụnye ugwu ndị dị njọ, na-ere calorie 1,196 ọkụ maka mmadụ 155-paụnd.07.05.2019
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọgawere oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ime ka abụba zuru oke ma kwalite ịdị arọ dị mma. Ijibelatan'ozuzu afọ girth, agafeghị oke-osisi ike aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Cygba ígwèotuaka elekerekaụbọchịmaka ọnwụ ọnwụ bụ ụzọ magburu onwe ya iji bulie ọnwụ. Onye dị otu narị na iri abụọịgba ígwèmaka iheaka elekereke ufọt ufọt osisi ọkụ ihe 650 calories. Ọbụnaịgba ígwèNkeji 30 aụbọchịanọgide na otu afọ nwere ike ọkụ ihe karịrị 100,000 calories na-ebute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 pound nke ọnwụ.Jul 25. 2020bọchị 2020
ikpere na-ekpo ọkụ
Ọtụtụ mgbe,ịgba ígwèugboro abụọ aụbọchịọ bụghịnke ukwuu.Ọtụtụndị na-eme egwuregwu na-azụ ọzụzụ ugboro abụọ aụbọchịọ dịghịkwa ihe kpatara yandị na-agba ịnyịnya ígwèịdị iche. Ihe ndị dị mkpa bụ oke olu na ike jikọtara ya na ahụike n'oge ọ bụla. Naọtụtụikpe,ịgba ígwèugboro abụọ aụbọchịpụrụ ịba nnọọ uru.18 nke 2018 Nov.
Kedu ka esi etinye njem na igwe kwụ otu ebe?
Naanị kee ya n'elu akwa azụ pannier gị. Ungedọ Bungee nwere ike ịbụ ihe kachasị mma, mana ịnwere ike iji eriri mkpakọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwara ịkwanye ya n'elu tube. Orient natripodnke mere na swivel isi dị na ihu ihu nke ogbe ahụ, na ụkwụ ya na-arapara n'azụ.
Kedu akụkụ nke ahụ mmadụ na-ada ụda na-agba?
Ọ na-agbado gị quads, glutes, hamstrings, na ụmụ ehi. Iji mee ka ụkwụ gị sie ike karị, gbalịa omume dị elu, dị ka squat, ịpị ụkwụ, na ngụgụ, oge ole na ole kwa izu iji kwalitewanye gịịgba ígwèarụmọrụ.bọchị 2020
Cycgba ígwè ọ dị mma dị ka ịga ije?
Cygba ígwèbụ ịrụ ọrụ nke ọma karịana-eje ije, yabụ na ị ga-arụsi ọrụ ikena-eje ijebriskly ma eleghị anya jiri obi gị, akpa ume na akwara ndị ọzọ rụọ ọrụ. N'akụkụ aka nke ọzọ,ịgba ígwèbụ ikekwe obere ike na gị hips, ikpere na nkwonkwo ụkwụ kana-eje ije.